विश्वकपः गोल्डेन ग्लोभको दौडमा बेल्जियमका किपर कोर्टोइस अगाडि, यस्तो छ अंक तालिका, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
विश्वकपः गोल्डेन ग्लोभको दौडमा बेल्जियमका किपर कोर्टोइस अगाडि, यस्तो छ अंक तालिका
मस्को (एजेन्सी)। विश्वकप फुटबलमा फाइनल र तेस्रो स्थानको प्रतिस्पर्धा मात्र बाँकी रहँदा उत्कृष्ट किपरको दौड निकै प्रतिस्पर्धी भएको छ । आगामी आइतबार र्फानल खेल भएसँगै गोल्डेन बुट, गोल्डेन बल र गोल्डेन ग्लोभ जित्ने खेलाडी पनि तय हुनेछन् । गोल्डेन बुटको लागि इङ्ल्याण्डका ह्यारी केन सबैभन्दा अगाडि छन् । उनले ६ गोल गरेका छन् । उनको सबैभन्दा नजिकका प्रतिस्पर्धी बेल्जियमका रोमेलो लुकाकू हुन् । लुकाकूको ४ गोल छ । यस्तै प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सका किलियन एम्बापे र एन्टोनी ग्रिजम्यान पनि छन् । उनीहरु दुवैको ३–३ गोल छ । यी सबैले १–१ खेल खेल्न बाँकी छ ।
उता उत्कृष्ट किपर अर्थात गोल्डेन ग्लोभको लागि पनि निकै तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यो दौडमा सबैभन्दा अगाडि बेल्जियमका थिबाउट कोर्टोइस सबैभन्दा अगाडि छन् । उनले ६ खेलमा २२ गोल बचाएका छन् । यद्यपि यो रेस अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । इङल्याण्डका जोर्डन पिकफोर्ड, फ्रान्सका हुगो लोरिस र क्रोएसियाका डेनियस सुबासिस निकै कडा प्रतिस्पर्धामा छन् । यी सबै गोलकिपरले निकै संकटको अवस्थामा आफ्नो टिमलाई जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् ।
बेल्जियमका कोर्टोइसले यो विश्वकपमा ६ खेलमा २२ गोल बचाएका छन् र ६ बल क्लियरेन्स गरेका छन् । उनको बचाव दर ८६.६ प्रतिशत छ । उनले १५१ सही पास खेलेका छन् र आफ्नो टिमका साथीसम्म सिधा बल पुर्याउने औसत ८० प्रतिशत छ । उनी अहिलेसम्म ५४० मिनेट मैदानमा रहँदा २३.६ किलोमिटर दौडेका छन् । इङल्याण्डका पिकफोर्ड ४८० मिनेट मैदानमा रहँदा १६१ सही पास खेलेका छन् । उनले ५ खेलमा ७ बल क्लियरेन्स गरेका छन् र १० गोल बचाएका छन् । उनको बचाव औसत ७१.४ प्रतिशत छ र उनको आफ्नो साथी खेलाडीसम्म सिधा बल पुर्याउने औसत ८२ प्रतिशत छ ।
फ्रान्सका हुगो लोरिस ५ खेल खेलेका छन् । यी खेलमा उनले ७ बल क्लियरेन्स गरेका छन् र ११ गोल बचाएका छन् । उनको बचाव दर ७३.३ प्रतिशत छ र उनले ८४ सही पास गरेका छन् । उनको आफ्नो साथीसम्म सिधा बल पुर्याउने औसत ५३ प्रतिशत छ । क्रोएसियाका डेनियल सुवासिसले ४ खेलमा ६ बल क्लियरेन्स गरेका छन् र १२ गोल बचाएका छन् । उनको बचाव दर ८० प्रतिशत छ । उनले १०८ सही पास खेलेका छन् । आफ्नो साथी खेलाडीसम्म सिधा बल पुर्याउने औसत ५९ प्रतिशत छ ।